Tambajotra fikarakarana ny tany | Entprima Mozika sy bebe kokoa
Betsaka kokoa ny olona miahy ny planetantsika sy ny fivoaran'ny zanak'olombelona noho ny hita ao amin'ny vaovao isan'andro. Ny Earth Care Network dia fiezahana hampiseho ireo olona ireo sy ny hetahetany.
Ny fifantohana dia tokony ho amin'ny fanangonana, ny ambiny dia tokony hatao amin'ny Internet. Ny rohy dia tsy misy rohy mankany amin'ireo antontan-taratasy elektronika efa navoaka. Noho izany, tsy mikasika ny olan'ny fiarovana ny angona izany. Ireo firaketana dia noforonin'i Entprima araky ny fahalalàna na fanirian'ireo olona manolo-tena. Ireto ambany ireto misy fitsipika.
Ny ECN dia tsy fikambanana, fa fandraisana andraikitra manokana an'ny Entprima mpanorina Horst Grabosch. Izay olona na fikambanana akaiky ny tanjon'ny fanangonana dia afaka mangataka fidirana. Ny rohy rehetra dia afaka manamaivana ny fahatsapana ho tsy misy hery manohitra ireo fitaomana manimba eto amin'ny planetantsika.
Fangatahana / fangatahana fanovana
Ny hevitra ao ambadiky ny ECN
Tanjona sy fitsipika
Ity lisitra ity dia manana asa tena tsotra. Mba hampisehoana fa misy olona sy fikambanana maro izay miahy ny zavatra tsara. Izay fiovana rehetra dia tsy maintsy hitranga voalohany ao an-tsaintsika, ary mora kokoa izany raha tsy mahatsiaro tena ho irery isika.
Nandritra ny 65 taona niainako dia fantatro fa hianjera tanteraka ny fiantraikan'ny fampielezan-kevitra raha toa ka mangalatra tanjaka loatra azy ny fikambanana rafitra. Ka tsy misy sokajy eto, na firafitra hafa. Izy io dia lisitra fanakorontanana hahazoana tanjaka vaovao amin'ny ady amin'ny halozana, fahantrana, fanimbana ny tontolo iainana, fanavakavaham-bolon-koditra, fanararaotana ankizy, ady ary zavatra manimba maro hafa.
Raha te ho tanisaina eto ianao dia tsy mila mpiady mavitrika, satria hanilika ireo rehetra izay efa very ny heriny rehetra tamin'ny tolona ho amin'ny fiainana. Tsy maninona na milaza manokana ny toerana misy anao ianao, amin'ny maha fikambanana anao, na amin'ny maha orinasa manohana anay. Tokony hanana rohy mankany amin'ny tranokala na kaonty amin'ny tamba-jotra sosialy ianao mba hahafantaran'ny olona bebe kokoa momba anao.
Fehezan-teny tokana mifandraika amin'ny olanao, ny toerana itodiana no nahitanay anao izahay, na ny toerana tianao hampifandraisina sy ny fiteny momba ny fisehoanao efa navoaka tamin'ny internet. Satria io no toerana itodihana izay ahitana ny mombamomba anao rehetra dia tsy mampiseho anarana izahay.
Izahay dia nanarato ny fidirana voalohany avy amin'ireo mpifanerasera efa misy anay ao amin'ny tambajotra sosialy. Na izany aza, izay mahatsapa fa mifandray amintsika dia afaka mangataka rohy (bokotra etsy ambony). Araka ny efa voalaza dia mila ny fehezanteny fototra / teny filamatra, ny rohy ary ny fiteny amin'ny famoahana isika.
Andian-teny / teny faneva lehibe - Fantatsika fa tsy asa mora izany. Tokony ho fohy ilay fehezanteny ary farito ny hevi-dehibe mampanahy anao. Fantatry ny rehetra fa misy hafa noho ny fehezanteninao ny olanao. Ny teny an'ity fehezanteny ity, izay tokony ho tsotra ampy ho azo amin'ny fandikan-teny rehetra, no hany fanamby amin'ny fidiranao. Fa ny ezaka dia ho ilaina amin'ny fiainanao manontolo!
Azonao atao ny mampiasa ny sary famantarana (mitovy amin'ny fisehoany eto) tsy misy fetrany! Satria manantena ny hahita ny tenantsika amin'ny maha olom-pirenenan'ny planeta Tany antsika rehetra isika, ary mijanona tsy hanondro ny fiaviany eto.
Eto izahay mba hanaparitaka fanentanana eran'izao tontolo izao momba ny fahantrana. ♥ Facebook / Anglisy
Izahay dia mamorona kitapo misy valiny ho an'ny diantsika iraisana mankany amin'ny ho avy tsaratsara kokoa ♥ Instagram / Anglisy
Izahay dia mamorona feon-kira tsy manam-paharoa ho an'ny fanahin'ny olona izay miahy tontolo milamina ♥ Instagram / anglisy
Izahay cool ankizy mamonjy planeta mafana ♥ Instagram / Anglisy
Izahay dia fikambanana manolo-tena amin'ny fananganana rahampitso tsaratsara kokoa amin'ny alàlan'ny fahatsiarovan-tena sy fiainana velona ♥ Instagram / anglisy
Izaho ofitsangatsanganana mba ho lasa olombelona tsara kokoa amin'ny alàlan'ny fanaovana dingana kely ara-tontolo iainana tsirairay ♥ Instagram / Anglisy
Manandrana izahay hanavotana feso sy tany malalaka amin'ny plastika ♥ Instagram / Anglisy
Manampy amin'ny famoronana ho avy maharitra amin'ny alàlan'ny fisainana miovaova, fiovana tsara ary fanitarana ny fahalalantsika ♥ Instagram / Anglisy
Izahay dia mamorona kojakoja beaded beaded ho an'ny olona misokatra sy milamina ♥ Webshop / Alemanina
Vondron'olona monina ao Toronto izay miasa saina izahay miara-miasa amin'ny fitakiana ny hetsika sy ny toetr'andro eo an-toerana sy manerantany ♥ Instagram / Anglisy
Manangona fitaomam-panahy eko maimaimpoana plastika ho anao ♥ Instagram / anglisy